လက်ထပ်မထားဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိလာတဲ့အခါ …
October 30, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
ဗိုက်ထဲမှာ အသက်တစ်ချောင်း ထည့်လွယ်ထားတဲ့ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် ပပ (အမည်လွှဲ)ရဲ့ဘ၀ဖြစ်ရပုံက မိသားစုငွေကြေး အခြေအနေကြောင့် မန္တလေးကနေ ရန်ကုန်ကို လာအလုပ်လုပ်တယ်၊ချစ်သူနဲ့ အတူနေပြီး မမျှော်လင့်ဘဲရလာတဲ့ ကိုယ်ဝန်ကြောင့် ကောင်လေးရဲ့ ထားသွားခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုဇာတ်လမ်းမျိုးတွေကို မြန်မာဇာတ်ကားတွေထဲမှာ တွေ့ရသလို အပြင်လောကထဲမှာလည်းတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဇာတ်နာရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပေမဲ့လည်း ခင်ပွန်းသည်ပြစရာမရှိဘဲ ကိုယ်ဝန်ရှိလာကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ မြန်မာလူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းမှာတော့ မျက်နှာပန်းမလှစရာ၊ အရှက်ရစရာလို့သတ်မှတ်ခံကြရပါတယ်။ “ယူမယ်။ ဒါပေမဲ့ ကလေးနဲ့ကျတော့ အဆင်မပြေဘူး။ ကလေးဆိုတာ ဘယ်အချိန်ပဲပြန်ယူယူရတယ်ပေါ့.. သူက။ ဖျက်ချမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ သမီးက အဲဒါလက်မခံဘူး”လို့ဝမ်းနည်းရိပ်ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံနဲ့ ပပက ပြောလိုက်ပါတယ်။“သူရော ကိုယ်ပါ နှစ်ယောက်ပေါင်းတောင်မှ ဒီကလေးတစ်ယောက်ကိုလုပ်မကျွေးနိုင်ဘူးလားပေါ့”လို့လည်း သူက မေးခွန်းထုတ်လိုက်ပါသေးတယ်။ သူ့မေးခွန်းက သူ့ကိုပစ်သွားတဲ့ ကောင်လေးကို ရည်ညွှန်းတာလား၊ စာရေးသူကိုပဲ မေးလိုက်တာလား၊သူ့ကိုယ်သူပဲ မေးလိုက်တာလားကတော့ […]
ဘုန်းကြီး နဲ့ အပျိုကြီး တွေ့ကြလေသောအခါ
October 29, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
မှတ်မှတ်ရရ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်(ရန်ကုန်)တွင် ဓမ္မာစရိယ (ဘီအေ) တန်းနောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်နေစဉ်ကဖြစ်၏။ ဘွဲ့ယူစာတမ်းရေးတင်ရန်အတွက် ပရင်တာတလုံးမဖြစ်မနေလို့အပ်နေ၍ အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတပါးနဲ့ ပေါင်းပြီး ပရင်တာတလုံးဝယ်ရန် ကြည့်မြင်တိုင် ညဈေးလမ်းက ကွန်ပျူတာဆိုင်တစ်ဆိုင်သို့ ၀င်လိုက်ကြ၏။ ဆိုင်ထဲတွင် လူများများစားစားမတွေ့ရပဲ ဈေးဝယ်သူအချို့နဲ့ ၀န်းထမ်းဒကာမလေးတယောက် ၊ နောက် ငွေရှင်းကောင်တာတွင်ထိုင်နေသည့် ဆိုင်ရှင်ဟုထင်ရသည့် အသက် ၃၀ ကျော် ၄၀ ၀န်းကျင် ခန့် မျက်နှာထားခပ်တင်းတင်း ဒကာမတယောက်တို့သာရှိ၏။ ၀န်ထမ်းဒကာမလေးက တခြားဈေးဝယ်သူတို့ကို ပစ္စည်းပြနေရ၍ မိမိတို့ထံသို့ မလာနိုင်ပေ။ ထို့ကြောင့် ပိုင်ရှင်ဒကာမကြီးက ထိုင်ရာမှထလာပြီး“ဦးဇင်းလေးတွေ ဘာဝယ်ချင်လို့လဲဘုရား၊ တပည့်တော်က အပျိုးကြီးဆိုတော့ ဆိုင်မှာ ၀န်ထမ်းသိပ်မထားဘူး”“ပစ္စည်းမှန်၊ဈေးမှန်ဖို့တော့ တာဝန်ယူတယ်ဘုရား၊ တပည့်တော်က အပျိုကြီးဆိုတော့ ဈေးအရမ်းကြီးတင်မထားသလို ပစ္စည်းအတုလဲ မတင်ဘူးဘုရား”“၀ယ်မဲ့ ပစ္စည်းကိုတော့ သေခြာ စိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးမှ ၀ယ်ပါဘုရား၊ […]
ကိတ်ချင်တဲ့မမတွေကို သတိပေးပါရစေ… ဒီဒုက္ခတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် အရင်ကြိုးစားထားကြနော်….။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ အလှတရားတစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ ရင်သားတွေအကြောင်း အမြဲတမ်းအမွှမ်းတင်ပြောဆိုရေးသား ကြတာမျိုး ဖတ်ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ခုနောက်ပိုင်းမှာဆို ရင်သားပိုမိုဖွံ့ထွားဖို့အတွက် နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ ကြိုးစားနေကြတဲ့ ပျိုမေတွေလည်း မနည်းမနောပါပဲ။ သာမာန်ထက် ကြီးမားဖွံ့ထွားတဲ့ရင်သားကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ရွယ်တူတွေကြားမှာသာမက လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာပါ အခက်အခဲတစ်ချို့ကို ရင်ဆိုင်ကြရလေ့ရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ သူတို့သိချင်မှ သိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရင်သားဖွံ့ထွားလွန်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ ကြုံတွေ့ကြရတဲ့ အခက်အခဲတစ်ချို့ကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။အင်္ကျံအ၀တ်အစားရွေးချယ်တော့မယ်ဆို ဆိုက်ဒ်ရယ်၊ လည်ပင်းဟိုက်မဟိုက် စတာတွေကို အထူးဂရုပြုရွေးချယ်ရလေ့ရှိတယ်။ အကျီတစ်ထည်ဝယ်တော့မယ်ဆို ဆိုက်ဒ်က ငါနဲ့အရမ်းကျပ်နေမလား၊ ရင်ဘတ်နေရာက အဆင်ပြေပါ့မလား ဆိုတာတွေအပြင် လည်ပင်းက အရမ်းဟိုက်နေမလားဆိုတာကိုပါ သတိထားရွေးချယ်ဝယ်ယူရပါတယ်။ မဟုတ်လို့ကတော့ နောက်ပိုင်း အ၀တ်အစား ၀တ်ခါနီးတိုင်း ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲတွေက ဆက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်လာမှာပါ။ ၂။အောက်ကို နည်းနည်းလေး ကုန်းလိုက်တာနဲ့ […]
သူဌေးနဲ့ အိမ်ဖော်မလေးရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်း
ထိုနေ့ညက အဖြစ်အပျက်က မလွင်ကြည့်ဖူးသည့် မြန်မာဗီဒီယိုဇာတ်ကားမှ ဇာတ်ဝင်ခန်းများနှင့် ဆင်တူသည်။ သို့သော် မလွင်ကြုံနေရသည်က ဗီဒီယိုထဲတွင် သရုပ်ဆောင်နေခြင်း မဟုတ်။အမှန်တကယ် ကျားရှေ့ မှောက်လျက်လဲနေခြင်းပင်။ “အဲဒီညက အလုပ်ဝင်ပြီး လေးရက်မြောက်ည။ ဂျပန်ကြီးက အလုပ်က ပြန်လာတယ်။ ညစာစားပြီးတော့ ကျွန်မကို လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့ နှိပ်ခိုင်းတယ်။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး အတွင်းခံဘောင်းဘီကလွဲပြီး ဘာအဝတ်အစားမှ မပါဘူး။ ကျွန်မ နှိပ်ပေးနေတုန်း ဟိုကိုင်ဒီကိုင်လုပ်တယ်” ဟု မလွင်က သူ၏ ပထမဆုံး ငရဲခန်းကို ပြောပြသည်။“အဲဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း အတင်းရုန်းကန်ပြီး သူ့အခန်းထဲက ထွက်လာလိုက်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ . . .” သို့သော် ထိုငရဲခန်းတို့မှ မလွင် (အမည်လွှဲ) မလွတ်မြောက်နိုင်တော့ကြောင်း နောက်တစ်နေ့တွင် သိခွင့်ရလိုက်သည်။“ပွဲစား အန်တီကြီးဆီ ဖုန်းဆက်ပြီး […]
အိမ်ထောင်ရှိပါလျှက်နဲ့ ရင်ခုန်ချင်စရာကောင်းတဲ့ အလန်းလေးတွေ တွေ့လို့ ရင်ခုန်မိနေရင်…။
အိမ်ထောင်ရေးဖောက်ပြန်ခြင်း(တွေးစရာလေးပါ) အမျိုးသား – ကျွန်တော်ကအိမ်ထောင်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခြားမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရူးရူးမူးမူး ချစ်မိနေတယ်။ အဲဒါဘယ်လို လုပ်ရမလဲ။ အတိုင်ပင်ခံ – ဒီမိန်းကလေးဟာ သင့်ဘ၀အတွက် နောက်ဆုံး ချစ်နိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုတာ သင်သေချာလား။ အမျိုးသား – ဟုတ်ပါတယ်။ အတိုင်ပင်ခံ – ကွာရှင်းပြီး ခုမင်းချစ်နေတဲ့ တစ်ယောက်ကို ယူလိုက်။ အမျိုးသား – ဒါပေမဲ့ ခုလက်ရှိမိန်းမက နားလည်ပေးတယ် သည်းခံတယ် တော်တယ်။ ကျွန်တော်ဒီလို လုပ်ရင် သူ့အတွက် ရက်စက်ရာ ကျမလား။ အတိုင်ပင်ခံ – အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ တရားတယ် ရက်စက်တယ်လို့ ဆိုတာတွေ မရှိပါဘူး။ ခု မင်းချစ်နေတာက တခြားမိန်းကလေးဖြစ်နေပြီ။ အမျိုးသား – ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့် မိန်းမက ကျွန်တော့်ကို […]
“အသက် ၂၄ နှစ်ကျော်ရင် မလုပ်သင့်တော့တဲ့အရာတွေ”
October 28, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
သင်ဟာ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ မွေးသူတစ်ဦးဆိုရင် ဒီနှစ်ထဲမှာ ၂၄ နှစ်ပြည့်မှာဖြစ်ပြီး ၉၃ အောက်မွေးသူတွေကတော့ ၂၄ ကျော်သွားပါပြီ။ ဒီအရွယ်ဟာ လူငယ်လည်းမဟုတ်တော့သလို၊ လူကြီးလည်းမဟုတ်ပေမယ့် လူလတ်ပိုင်းအရွယ်အစ ဖြစ်တာမို့ နေထိုင်မှုပုံစံမှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလေး အနည်းငယ် လိုအပ်လာပါပြီ။ . ၁ – ဈေးပေါပေါအင်္ကျီတွေမ၀ယ်နဲ့တော့။ . ဒီအရွယ်မှာ အများအားဖြင့် ၀င်ငွေရှာနိုင်တဲ့ အရွယ်အပိုင်းအခြား ဖြစ်နေပြီဖြစ်သလို ငယ်ငယ်တုန်းကလို ဈေးနည်းနည်းနဲ့ အထည်များများ ၀ယ်တာမျိုး မလုပ်သင့်တော့ပါဘူး။ သင့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်၊ အသက်အရွယ်၊ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ လိုက်ဖက်ညီတဲ့ အ၀တ်အစားမျိုးကို ရွေးချယ်ဝတ်ဆင်သင့်သလို ခပ်ပေါပေါ အ၀တ်အစားမျိုးထက် ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး ၀တ်လိုက်တာနဲ့ အဆင့်အတန်းတစ်ခုရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးကို ၀တ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ . ၂ – ရည်းစားမရှုပ်နဲ့တော့။ . […]
ဆေးအောင် ချစ်ကြမယ်.. အိမ်ထောင်သည်များအတွက် အရမ်း တန်ဖိုးရှိတယ်..။
အိမ်ထောင်သည်များသာ ဖတ်သင့်တဲ့ ဗဟုသုတမှတ်စုတစ်ခုပါ..။ ချစ်ချင်းရဲ့ အစွမ်းအားလို့ ပြောလို့ရပါတယ်… ဆေးစွမ်းထက်တဲ့ အချစ်ဆေး ၁။ အရွယ်တင်နုပျိုစေပါတယ် တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံး လေးကြိမ် လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုလုပ်တဲ့ လင်မယားတွေဟာ ပုံမှန် လူကြီးတွေထက် ၁၀ နှစ်ကျော်ခန့် ပိုပြီး အရွယ်တင်နုပျို စေနိုင်တယ်လို့ Royal Edinburhg ဆေးရုံမှ သုတေ သန ပြုလုပ်ချက်အရ သိရပါတယ်။ “လိင်ဆက်ဆံ မှုကြောင့် ရရှိတဲ့ ပျော်ရွှင် ကျေနပ်မှုဟာ အရွယ်တင် နုပျိုဖို့အတွက် အရေးကြီး အချက် ဖြစ်တဲ့ adrenaline, dopamine နဲ့ noradrenalin တွေ ထုတ်လုပ်နိုင် ပါတယ်” လို့ အာရုံကြောနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထူးကု Dr.Dowid က ပြောပါတယ်။ […]
October 27, 2017 myanmarnine Leaveacommentဗဟုသုတ
မိဘကို ချစ်ရင် လုံးဝမရှက်ပါနဲ့… သားသမီးတိုင်းအတွက် ရှဲပေးခဲ့နော်…။ ကျွန်မအလယ်တန်း အထက်တန်း ကျောင်းသူဘဝတုန်းက ကျောင်းတက်ရင် အတန်းဖော်သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ်” နင့်အဖေ ဘာလုပ်လဲ နင့်အမေ ဘာလုပ်လဲ ” လို့မေးရင် ကျွန်မအရမ်းအားငယ်ရတယ် ကိုယ့်အဖြစ်ကိုဝမ်းနည်းမိတယ်” ငါ့ရဲ့ဖေဖေက စက်ချုပ်တယ် ငါ့ရဲ့မေမေက ထမင်းချက်တယ် ” ဆိုတဲ့အဖြေကို မရဲမဝံ့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖြေခဲ့ရတယ်( ” ငါ့ဖေဖေကအင်ဂျင်နယ်ယာ ငါ့မေမေကဒေါက်တာလေ ” ဆိုပြီး တချို့သူငယ်ချင်းတွေလို ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားစွာ ခြောဖချင်မိတာပေါ့ရှင် ) ဒါပေမယ့် … တကယ့်လက်တွေ့မှာ ကျွန်မအဖေကစက်ချုပ်တယ် ကျွန်မအမေကထမင်းချက်တယ်တနေ့တော့ … ” ဖေဖေ … သမီးကိုလေ သူငယ်ချင်းတွေက မေးကြတယ် နင့်မိဘတွေက ဘာအလုပ်လုပ်ကြတာလဲ ” တဲ့” […]